Ukuchazwa kwePlanethi Jupiter Nemithonya Ekufundweni Kwezinkanyezi - Izindatshana Zezinkanyezi
Main Izindatshana Zezinkanyezi Ukuchazwa kwePlanethi Jupiter Nemithonya Ekufundweni Kwezinkanyezi
Ukuchazwa kwePlanethi Jupiter Nemithonya Ekufundweni Kwezinkanyezi
Ekufundweni kwezinkanyezi, iJupiter imele iplanethi yokwandiswa, ukushukuma komzimba okuhle, ilukuluku nokwakha. Le yiplanethi yenhlanhla enhle, ukuhamba amabanga amade, imizamo ehlobene nemfundo ephakeme nomthetho.
Ngaphansi kwethonya layo, abantu bathambekele kakhulu ekuhloleni nasekuzuzeni inkululeko yabo, ekuthatheni izingozi mhlawumbe nasekugembuleni.
IJupiter ihlotshaniswa nenkosi yonkulunkulu kanye nophawu lwayo, ukuduma kwezulu, futhi ingumbusi wesibonakaliso sesishiyagalolunye se-zodiac, I-Sagittarius .
Inkosi yamanye amaplanethi
IJupiter yiplanethi enkulu enamafu anemibala egqamile futhi yenza into yesine ekhanyayo esibhakabhakeni, ngemuva kweLanga, iNyanga kanye iplanethi uVenus .
Kukholakala ukuthi kunendima ebalulekile ekuvikelweni kohlelo lwelanga. Amandla ayo amakhulu adonsela phansi noma abamba izinkanyezi ezinomsila nama-asteroid ovela elangeni.
IJupiter ithatha cishe iminyaka eyi-12 ukuyijikeleza ilanga , ngaleyo ndlela sichitha cishe unyaka owodwa womhlaba kusibonakaliso ngasinye se-zodiac.
yisiphi isibonakaliso septemba 19
Mayelana neJupiter ekufundweni kwezinkanyezi
Inzuzo enkulu noma inhlanhla enkulu, le planethi idlulisa umuzwa wenhloso nokuzibandakanya nendawo ezungezile. Kuyasikisela kwemizamo yokuphana futhi kuzokhuphula amazinga wethemba labo bonke abomdabu.
Ihlobene nezindaba zokucabanga, noma ezingaqondakali noma ezingokoqobo ngoba yiplanethi yobukrelekrele. Ilawula izazi zefilosofi nezindaba zenkolo kanye nezindaba zomthetho, ukwahlulela nezingxoxo.
Imvamisa kuhlotshaniswa nesizathu esizwakalayo, ukutolika okuqondiwe kanye nesidingo sokwethula iqiniso noma ngabe kunemiphumela.
Ukuchuma kungafinyelelwa ngezindlela eziningi ezahlukahlukene futhi le planethi ibonakala ikhuthaza ukufezekisa ngezinkanuko nezifiso zomuntu, kunalokho umphakathi othi kusemthethweni.
I-Jupiter izokwengeza impahla futhi ikhulise ama-horizons kulabo abafaka amandla amahle abakuzungezile futhi izosiza ukwakha amaqiniso amasha, nge-karma enhle.
Le planethi ifaka inhloso lapho lokhu sekuzolahleka futhi kuzobekela inselelo ukuqonda kwabantu kanye nezinkolelo zomuntu siqu.
yini uphawu lwesinkanyezi ngumashi 24
Lokhu futhi kuyiplanethi yemidlalo, izinto zokuzilibazisa nemisebenzi ephumuzayo. I-Jupiter iphakanyisiwe Umdlavuza , buthakathaka ku ICapricorn futhi kulimaze i- IGemini .
Ezinye zezinhlangano ezivamile zifaka:
Indlu yeZodiac: Indlu yesishiyagalolunye
Usuku lwesonto: ULwesine
Itshe eliyigugu: Oluluhlaza
Igama ngelika: UNkulunkulu wamaRoma
Isikhathi empilweni: Kusuka eminyakeni engama-35 kuye kwengama-42
Igama elingukhiye: Ukuhlakanipha
Ubuntu, ukuqonda, ifilosofi nokwethembeka ngezinye zezici ezizuzisayo zeJupiter ekufundweni kwezinkanyezi. Kuzoholela kumuntu ongokomoya ophanayo nonakekelayo.
IJupiter njengeplanethi enkulu iqukethe ukuzethemba nokuchuma. Ngenye yamaplanethi alawula imiphumela yokusebenza kanzima futhi aqhubekisele phambili ukukhulisa ukwanda.
Ifinyelela kahle ohambweni lwazo zonke izinhlobo nokutholwa kwemfundo ephakeme, noma ngabe abomdabu bethambekele kakhulu ezifundweni. Ukukhuluma ngohambo, le planethi izothuthukisa ukutholakala ngohambo, kunokuhlola nje ngezinjongo zokuzijabulisa.
Ilawula izimo zengqondo zokuziphatha ezinhle futhi izokwenza owomdabu anake kakhulu izindaba zobulungiswa futhi angathambekeli ekuvumeni izilingo.
Ukufeza okuningi kakhulu nakho kungaguqula umuntu abe ngumuntu ongakhathaleli futhi owenqenayo. Umusa omningi ungenza umuntu abe nomuzwa wokuthi wonke umuntu ubakweleta okuthile.
Ingozi kaJupiter ukuthi ukukholwa ukuthi ungaphezu kwabanye nokuthi ucabanga ukuthi ungaba nezwi ngempilo yomunye umuntu. Lokhu futhi kuyiplanethi yokugxekwa kanye nemibono eqinile, noma ngabe lezi azigxili ngendlela eyakhayo.
Ithonya likaJupiter futhi lingaholela ekusetshenzisweni kwamandla noma kwezinsizakusebenza nasekuziphatheni ngokweqile nasekuphikiseni igunya. Kungaholela ekungakholweni kwabanye nasekuqondeni lapho singekho isidingo sangempela futhi kuphinde kuthuthukise isimo sokuthatha ingozi.
Ukuhambisana kwe-Aquarius Man ne-Sagittarius Woman Yesikhathi Eside
Isitayela Sokudlala Ngothando SaseCapricorn: Qondile Futhi Siphelele
i-pisces yesilisa ne-taurus yesifazane
ungayithola kanjani indoda ye-capricorn ukuthi ithandane
ukuhambisana kowesifazane we-capricorn nomdlavuza
yini uphawu lwe-zodiac ngo-ephreli 26
uphawu lwe-zodiac lwango-juni 13